महिलाहरु नै प्रधानमन्त्री हुने अवसर आउछ: प्रधानमन्त्री कोइराला « Nepal24Hours.com – 'Integration Through Media'
महिलाहरु नै प्रधानमन्त्री हुने अवसर आउछ: प्रधानमन्त्री कोइराला
२६ माघ २०७१, सोमबार २२:०३ मा प्रकाशित
प्रकाश अधिकारी, काठमाण्डौं, २६ माघ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई संस्थागत गरेपछि महिलाहरु नै प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर आउने बताउनु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले सो कुरा नेकपा –माओवादीको भातृ संगठन अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारीका तर्फबाट बुझाइएको ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै आज विहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सो कुरा बताउनु भएको हो । “ महिलाहरुले प्रतिबद्धता छ। महिलाहरुले बढी मिहेनत गर्नुहुन्छ ।महिलाहरुले सम्पूर्ण घर धानेका छन,” प्रधानमन्त्री कोइरालाले भन्नुभयो,“ पाएको स्वतन्त्रतालाई संस्थागत गरी उपयोग ग¥यौ भने महिलाहरु प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर आउछ ।आपसमा झगडा ग¥यौ भने जिन्दगी झगडामा नै बित्छ ।”
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले नेपाली जनताले तीन पुस्तादेखि लोकतन्त्रको स्थापना र विकासको लागि लडिरहेको बताउनु भयो । “ पहिले राणासंग संघर्ष भयो । राणा शासन खत्तम भएपछि राजाले पञ्चायत शुरु गरे । त्यसका विरुद्ध ३० बर्ष संघर्ष भयो । फेरी माओवादी द्वन्द्वमा १० बर्ष बित्यो । फेरि राजा बिरुद्ध संघर्ष भयो ,” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो,“ राजा गएपछि जनताको सरकार आएको छ । अब कोसंग लड्ने ? कति लड्ने ? किन लड्ने ?”
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफूले समेत ५५–६० बर्ष लोकतन्त्रको लागि लडेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो,“ तपाईहरु पनि सशस्त्र संघर्षमा लाग्नु भयो । कति साथी मरे । कति घाइते भए । कतिको अंगभंग भएको छ । अब संघर्ष हैन, संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरु संस्थागत गर्ने कार्यमा सबैको समान सहयोगको आवश्यकता छ ।”
प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफू पनि शिक्षा,स्वास्थ्य र रोजगारी दिने अवस्था सिर्जना गर्न लागि परेको बताउनु भयो ।सघका अध्यक्ष एवं पूर्व सभासद् अमृता थापाको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधि मण्डलले अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम आमजनताको लागि राज्यले शिक्षा,स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान अन्तरगत सरकारले केही कार्यक्रमहरु सञ्चालन नगरेको उल्लेख छ । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा दिइएको रीटमा केही बर्ष अगाडि नै कानून बनाएर काम गर्न निर्देशनात्मक आदेश भए पनि सो नगरिएकोले यथाशीघ्र गराउने व्यवस्था होस भनेर ज्ञापन पत्रमा माग गरिएको छ ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले मुलुकको प्राकृतिक देनको दिगो उपयोग गर्न नसकेसम्म नेपालमा गरिबीमाथि गरिबी नै बढ्ने बताउनु भयो । उहाँले रोजगारीको खोजीमा विदेशिएका ३५ लाख युवाहरुको अवस्थाप्रति पनि ध्यानाकृष्ट गराउदै भन्नुभयो,“ खाडीमा जानुभएका महिलाहरुको दुःख तपाई कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न ।” प्रधानमन्त्री कोइरालाले मुलुकमा शान्ति र अमनचयन कायम गर्न सके आन्तरिक र बाह्य लगानीबाट मुलुकको विकासमा कायापलट गर्न सकिने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो,“ शान्ति र अमन चयन कायम गर्दै संविधान दिन सक्यौ भने हाम्रो जीवनकालमा नै धेरै परिवर्तन हुन्छ । शान्ति र स्थायित्वको अभावमा कसैले लगानी गर्दैन ।”
प्रधानमन्त्री कोइरालाले २०६२÷६३को जनआन्दोलनपछि मुलुकमा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल भएको बताउदै आपसी विश्वास,समझदारी, वार्ता,सम्वाद, एकता र मेलमिलापका आधारमा संविधान निर्माण गरी जारी गर्न सकिने बताउनु भयो । उहाँले संविधान निर्माणमा सहमति गरेर जाने आफ्नो सदासयलाई केही दलहरुले बुझ्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“ डराउने र धम्क्याउने गरेर त सहमति हुदैन नि । सहमतिमा वीन–वीनको कुरा आउछ । गिभ एण्ड टेकको कुरा आउछ । मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेर कसरी हुन्छ ? उहाँले समाजको रुपान्तरणकोलागिे सकारात्मक परिस्थिति सिर्जना गर्न सबैसंग सहयोगको अपील पनि गर्नुभयो ।
सो अवसरमा पूर्वसभासद् थापाले आफ्नो दललाई चुनावको बेलामा नै छुटाइएको गुनासो गर्नु भएको थियो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले चुनावमा सहभागी बन्न आफूले निरन्तर आग्रह गरेको र निर्वाचनमा सहभागी नभए पनि संविधान निर्माणमा सहभागी बनाउन सर्वपक्षीय सम्मेलन समेत आयोजना गरेको स्मरण गराउनु भएको थियो ।